ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खुद नाफा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, खराव कर्जा पनि घट्यो !
ARCHIVE, MARKET WATCH » ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खुद नाफा २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, खराव कर्जा पनि घट्यो !
काठमाण्डौ - ग्लोबल आइएमई बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को चौथो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्याण्डर्ड (एनएफआरएस) अनुरुपको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले २ अर्ब १५ करोड खूद नाफा कमाएको छ । बैंकले खूद ब्याज आम्दानीतर्फ ७.३२ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ५६ करोड रहेको खूद ब्याज आम्दानीलाई बढाएर बैंकले यो वर्ष ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार बैंकको संचालन नाफा बढेर २ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । यता निक्षेप संकलनमा ४.५१ प्रतिशतको प्रगति गरेको बैंकले कर्जातर्फ १५.५३ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । जगेडाकोषतर्फ बैंकले ८९.२५ प्रतिशतको प्रगति गरेको छ । यता बैंकले समीक्षा अवधिमा बैंकले खराब कर्जाको अनुपातलाई घटाएको छ । अघिल्लो वर्ष १.६० प्रतिशतको अनुपातमा रहेको खराब कर्जा घटेर ०.६९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २४.२६ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १५१.४५ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात ११.९५ गुणा कायम भएको छ ।